Ama-Athy Archives - IntoKildare
Vakashela i-Athy ebukekayo e-County Kildare futhi uhlole izinqaba ezindala zamatshe, izindlela zokuhamba eziphumuzayo, nama-manors amahle.
I-Athy ingelinye lamadolobha amabili amagugu eKildare futhi yathuthukiswa yaba idolobha lezimakethe ngenxa yomsele kanye nenethiwekhi yemifula - ilapha uMfula iBarrow uhlangana negatsha le-Athy eGrand Canal. I-Athy yaziwa umhlaba wonke ngokubamba iShackleton Autumn School ngenhloso yokuhlonipha umhloli wamazwe omkhulu, u-Ernest Shackleton, owazalelwa eKilkea eseduze futhi empeleni kuyikhaya lombukiso waphakade owenzelwe umhloli wamazwe.
Thola umlando wamaQuaker eKildare ngokuvakashela eBallitore naseBurtown House & Gardens, noma uthathe uhambo lokuhamba ngesikebhe eduze noMfula ukubona leli dolobha lisuka kolunye uhlangothi. Hlola izindawo zamagugu zasendulo ezifafazwe kuyo yonke indawo efana neKilkea Castle neWhites Castle, eziqhamuka ezikhathini zamaNormans noFitzgeralds (the Earls of Kildare), kuyilapho abali-12th ikhulu le-Moate of Ardscull lidume kakhulu ngezinganekwane "zabantu abancane".
Ubuciko Namasiko Ukuzidela Nemisebenzi Amagugu Nomlando Outdoors Shopping I-Equestrian Kildare
AmaPub & Impilo yasebusuku Ithilomu Amathilomu Abakhiqizi
Indawo Amahhotela Indawo yokulala nokulala kwasekuseni Ukuziphekela Amatende eKildare
Athy Isikebhe Tours
Uhambo olumangalisayo lwesikebhe kuThe Barrow & Grand Canal ngokubukwa okuhle nokubonisa umoya okuphefumulayo.
Ibha ne-Bistro yeBailey
Amamenyu wokunisela umlomo alungiselelwe abapheki abaphezulu, anikezwe endaweni enesitayela futhi ekhululekile yithimba elibakhathalelayo ngempela.
IBurtown House & Gardens
IBurtown House eC. Kildare yindlu yaseGeorgia yasekuqaleni ngase Athy, enengadi enhle engamahektare ayi-10 evulekele umphakathi.
IClanard Court Hotel
I-4 Star Hotel enezindawo zokuhlala zikanokusho, indawo enhle kakhulu nabasebenzi abafudumele nabanobungane.
ICrookstown Craft Village
Igugu elifihliwe elithengisa izinto eziningi zezipho ezenziwe ngezandla ezivela kubumbi, abaculi nezingcweti. Ikhefi elikhethekile kanye ne-deli.
Ikharavani elisevisi ephelele nepaki yokukanisa etholakala epulazini lomndeni elihle.
Indawo yokuhlala kanokusho kwesinye sezinqaba ezindala kunazo zonke e-Ireland esukela ku-1180.
IShackleton Museum Athy
Museum Museum okuwukuphela kombukiso waphakade emhlabeni ozinikele ku-Ernest Shackleton, umhloli wamazwe omkhulu wase-polar.